ग्यास्ट्रिक छ? यस्ता छन् जोगिने उपाय « Lokpath
ग्यास्ट्रिक छ? यस्ता छन् जोगिने उपाय
ग्यास्ट्रिकका कारण धेरैले आजभोलि टेन्सन पाइरहेका छन् । पेटमा अतिरिक्त अमिलो जम्मा भएपछि ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ । ग्यास्ट्रिक बिग्रियो भने अल्सर तथा क्यान्सर पनि हुन सक्छ । जटिल खाद्य पदार्थका लागि शरीरमा एसिडको मात्रा सामान्य हुनु जरुरी पनि हुन् । एसिडिटी कम भए पनि बढी भए पनि यसले पेटमा समस्या पारिदिन्छ ।
तपाईंमध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तनावले पनि ग्यास्ट्रिक बढाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ । अधिक धुम्रपान र अल्कोहलले पनि ग्यास्ट्रिक हुने गर्छ । धेरै चिल्लो, पीरो, तातो खानाले पनि एसिडिटी गराउने गर्छ ।
ग्यास्ट्रिकबाट बच्नका लागि ग्रीन टीको अवधारणा आएको छ । पुदिनायुक्त हर्बल चिया पिउँदा यसले ग्यास्ट्रिक कम गर्दै लैजान्छ । र, बिहान उठ्नासाथ पानी पिउँदा पनि केही मात्रामा ग्यास्ट्रिकबाट बचाउन सक्छ । यस्तै समयमा खाना खाना खाने हो भने ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ ।
यदि ग्यास्ट्रिकबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने मसला, अचार र तेल भएको खाने कुरा पनि कम खान डाक्टरले सल्लाह दिँदै आएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०७५,भाद्र,१५,शुक्रवार १५:०८
बन्दाकोबीको पात खाँदा दिमागमा जान सक्छ यो किरा
स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बन्दाकोबीको पातलाई स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा मानिन्छ । तर, बन्दाकोबीको पात खाँदा भने विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यदि
खाना पचाउन मद्दत गर्ने योग आसन (भिडियो सहितं)
खाना खाएपछि हामी सामान्यतया केही बेर सुस्ताउँछौँ वा केही समय स्थिर भएर बस्छौँ । यो तपाई हामी सबैको चलन हो
युरिक एसिड छ ! चाडपर्वमा यस्तो किसिमको खानपिन गर्नुहोस् (भिडियो सहित)
युरिक एसिड भएका व्यक्तिहरूलाई चाडपर्वको समयमा सबैभन्दा नमिल्ने भनेकै खानपिन नै हो । अझ दसैँ जस्तो महान् चाडपर्वको अवसरमा युरिक
खानेकुरा अपच भएमा के गर्ने (भिडियो सहित)
चाडपर्वको अवसरमा नेपालीहरूको खानपानमा व्यापक परिवर्तनहरू देखिने गर्छ । अझ वर्ष दिनमा एक पटक आउने चाडबाडको समयमा सबैले घरमै मिठो